Tue, Sep 29, 2020 | 15:28:22 NST
प्रश्न : म युएईमा रोजगारीको लागि जान चाहान्छु । युएईको भिसा आउन कति दिन लाग्छ ? र जम्मा लागत कति लाग्छ ?
उत्तर : निम नन्दन जी, युएईको भिसा आउन ठ्याक्कै यति दिन लाग्छ भन्न सकिदैन । हामीले आधिकारीक संस्था संगै कुरा गर्यौं । तर मानीसहरुको अनुभवमा चाहि केहि हप्ता देखि महिना सम्म पनी लाग्न सक्छ । यो कुरा कम्पनी अनुसार र म्यानपावरले भिसा अप्लाइ गरेको मितिले नी फरक पार्छ । लागतको कुरा गर्दा चाहि, नेपाल सरकारले जारी गरेको न्युनतम लागत खर्च लागु भइसकेपछि जम्मा १० हजार देखि १८ हजार सम्म मात्रै लाग्छ ।